MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA HAVACHON - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Havachon
Bichon Frize / Havanese ey isku dhafan
Lani the Havachon sida eey yar oo jirta 10 bilood
Havachon ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bichon Frize iyo Havanese . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
deerada madaxa chihuahua isku darka ceesaan
Roxy the Havachon markuu jiray 8 sano
Tani waa Havachon oo afar jir ah oo magaciisu yahay Enna. Iyadu waa qof aad u caqli badan waxayna garaneysaa tabaha badan sida rogrogmada, ciyaarta oo dhimata, gariir, qoob ka ciyaarka iyo mowjadaha. Enna aad bey u jilicsan tahay waxayna ku raaxeysataa la kulanka dadka iyo eeyaha cusub. Iyaduba way ku raaxeysataa socodka iyo ciyaaro soo qaad. Enna waxay jeceshahay cuntadeeda! Waxay u muuqataa inay had iyo jeer ku saxan tahay hoostaada jikada, iyadoo sugeysa in qashin uu ku soo dhaco. Ey yar ahaan, Enna way fududayd tareenka dheriga . Waxay kaliya labo shil ku gashay guriga. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan Enna ku leenahay qoyskeena waa eyga ugu fiican ee aan codsan lahayn. Qof kastaa wuu jecel yahay iyada oo hadda saddex qof oo kale oo qoyskeenna ah ayaa sidoo kale leh Isku-darka Bichon ! '
'Tani waa ugu badnaan 8 bilood jir. Bal eeg sida midabbada jaakadkiisu isu beddeleen? Taasi waa astaamaha wanaagsan ee Havanese. Timihiisu aad bay u jilicsan yihiin, waan ku raaxaystaa salaaxida isaga. Waxaan leenahay nolol maalinle ah oo fiidnimo ah halkaas oo aan ku xoqdo wixii dermo ah burushka sibirqaarka leh. Haddii uu aad u jahwareerayo, waxaan ka helayaa mid ka mid ah lafahaas cinjirka leh jeexjeexyada ilkaha lagu nadiifiyo oo waxaan ku buuxiyaa jeexjeexyada subagga looska. Wuxuu ku calashaa lafta dhabta dhabta ah umana muuqato inuu igu arko aniga iyo burushka jilicsan. Waxaan isticmaalaa wax buufin kara markii aan cadayanayo, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan cadayo maalin walba kahor intaan dermooyinku iyo dhibbanayaashu bilaabin inay dhibaan.
'Waxaan daawadaa Eyga Whisperer ee xiisaha leh bandhigiisuna wuxuu iga caawiyay inaan noqdo milkiile ey fiican. Makhribkii, Max wuxuu taaganyahay albaabka barxada wuxuuna kudhawaqaa waxkasta oo dhaqaaqa. Waxaan bartay daawashada Cesar si aan u dhex maro Max iyo albaabka oo aan ula istaago mowqif odhanaya, 'kani waa albaabkaygii!' oo u sheeg Max 'maya jilif.' Kaliya waxay ahayd labo maalmood oo tababar joogta ah durba sifiican ayuu ugajawaabay.
'Max jecel biyaha iyo dhoobo. Sawirkan waxaa la qaaday ka dib markii si qurux badan loo duubay! '
'Tani waa Max, oo ah cunug u dhashay Havanese / Bichon. Bilowgii, Max wuxuu jecel yahay in sawirkiisa laga qaado. Degdeg buu u bartay fadhiga. Wuxuu aaday shaybaarkayaga madow, Gabe, waxayna si dhakhso leh u noqdeen saaxiibo. Gabe waa bukaan-socod eegto bukaan-socod, mahadsanid wanaag, maxaa yeelay Max ayaa ku dhan isaga, oo ku cunaya dabadiisa, cagihiisa, wax kastoo uu gaari karo
'Max wuu faraxsan yahay waana nool yahay sida eey kasta u yahay. Waxaan ahay naag howlgab ah oo dabeecad deggan, sidaas darteed waxaan ula ciyaarayaa Max si tartiib ah, waxaan ku dhiirrigelinayaa ciyaar jilicsan. Meel u dhow ayaan ku hayaa calaamadaha oo markii uu ku calalinayo faraha iyo suulasha, waxaan si fudud uga saaraya farahayga iyo lugahayga meeshuu gaadho waxaanan siinayaa toy. Waxaad moodaa inuu ku qanacsan yahay inta uu haysto wax uu ku calaliyo. Marka dabeecaddiisa dabiiciga ah ee ciyaarta uu noqdo mid dagaal badan, waan tagnaa socod ama orod si uu uga shaqeeyo xoogaa tamar ah Wuxuu ku jecel yahay banaanka.
'Max wuxuu jecel yahay caruurtayda awowgay, ugu horayn 3 jirka iyo 6 jirka gabdhaha ah. Wuxuu jecel yahay inuu ceyrsado oo wuxuu u helaa sida carruurta oo kale. Waxa uu ogaaday in ay tahay wax lagu farxo in lugaha lugaha iyo faraha la arko iyagoo qoob-ka-ciyaaraya, sidaa darteed caqabadaydu waa inaan ku ababiyo carruurta ay dhaleen si ay u ciyaaraan iyaga oo aan xamaasad badan lahayn.
'Tababarka dheriga waa caqabad weyn. Gaar ahaan, hadda roobab baa ka da’aya oo dibedda jooga. Midkeenna ma doonayo inuu ka mid noqdo waxyaabahaas xun. Waxaan isku dayay inaan u soo bandhigo suufka isaga, laakiin isagu wuxuu u qaatay caqabad shaqsiyeed inuu ku kaadiyo meel kasta laakiin sariirta laga baqo. Waxaan ka akhriyey tababarka sanduuqa boggaaga waxaana laga yaabaa inaad isku daydo taas. Waxaan ku ridayaa qolka habeenka iyo maalinta markaan mashquulka ahay ee aan isaga isha ku hayo (Waan jeclahay hurdada, sidoo kale!). Illaa iyo hadda, wax dhibaato iima siin. '
Muffin isku dar Bichon Frize Havanese (Havachon) markay jiraan 7 bilood
Lani the Havachon sida eey yar oo jirta 2 bilood
Lani the Havachon sida eey yar oo jirta 7 bilood
Sawirada Havachon 1
Liiska eeyaha Havenese Mix Breed
Liiska Eeyaha Bichon Frize Mix Breed
labrador oo weli Bernard isku darka
boston terrier iyo chihuahua eeyo isku dhafan
boqorka charles cavalier iyo bichon
akita iyo adhijirka reer german eey ey isku dhex qasan
ha coyotes nooc eeyaha